China Galvalume Aluzinc Steel Coil Manufacturers and Suppliers - Witop Steel
Home > Ngwaahịa > Galvalume Steel eriri igwe > Galvalume Aluzinc Steel eriri igwe
AZ120 AZ150 eriri ọkụ Galvalume steel
PPGI PPGL Prepainted Agba ntekwasa nchara ụlọ
Ọkụ na -ekpo ọkụ Galvalume Corrugated Roofing Sheet
G550 275 Zinc Hot tinye Galvanized Steel eriri igwe
Galvalume Aluzinc Steel eriri igwe Ndị nrụpụta
Qingdao Sino Witop Steel Co., LTD bụ onye nrụpụta na onye na -ebubata Galvalume Aluzinc Steel Coil na China. Witop Steel nwere ahịrị mmepụta galvalume abụọ nwere ikike kwa afọ nke tọn 200000, nke nwere ike mepụta ọkọlọtọ JIS G 3321, EN 10215 na ASTM 792. Ebupụla Galvalume Aluzinc steel Coil na mba na mpaghara karịrị 100 gụnyere Africa, European Union, South America, Middle East, Southeast Asia, na Central Asia. Galvalume Aluzinc Steel Coil enwetala nnabata nke ukwuu na South America niile n'ihi arụmọrụ na arụmọrụ ya.
Igwe mkpuchi nchara aluminium-zinc-silicon, Galvalume (GL maka mkpụmkpụ), bụ mpempe akwụkwọ nchara nke aluminom na-ekpo ọkụ (Al55%), zinc (Zn43.5%), na silicon (Si1.5%) alloy n'akụkụ abụọ. Galvalume Aluzinc Steel Coil egosila arụmọrụ ya dị elu dị ka ihe ụlọ na -eguzogide na -eguzogide n'ọtụtụ gburugburu. Galvalume Aluzinc Steel Coil nwekwara nguzogide ọkụ na nguzogide ọxịdashọn, arụmọrụ nhazi dị mma na nke ka mma.
Galvalume Aluzinc Steel Coil nwere uru karịa eriri igwe nchara galvanized.
1. Ngosipụta okpomoku:
Ngosipụta ọkụ nke Galvalume Aluzinc Steel Coil dị elu, nke bụ okpukpu abụọ nke eriri igwe nchara galvanized. Ya mere, ndị mmadụ na -ejikarị ya eme ihe maka mkpuchi ọkụ.
2. Nguzogide okpomọkụ:
Aluminom-zinc alloy steel plate nwere ezigbo nguzogide okpomoku ma nwee ike iguzogide oke okpomoku kariri 300 Celsius. A na -etinyekarị ya na tubes chimni, oven, luminaires na fluorescent lampshades.
3. eguzogide corrosion:
Nguzogide corrosion nke Galvalume Aluzinc Steel Coil bụ n'ihi ọrụ nchekwa nke aluminom. Mgbe zinc na-eyi, aluminom na-akpụpụta okpokoro okirikiri nke aluminom oxide, nke na-egbochi ihe ndị na-eguzogide nsị na-emebi emebi n'ime ime.
4. echekwa na bara uru:
Njupụta nke 55% AL-Zn dị ala karịa nke Zn site na ịdị arọ, mpaghara Galvalume Aluzinc Steel Coil karịrị 3% karịa nke mpempe akwụkwọ galvanized nwere otu ibu na otu mkpuchi ahụ.
5. Ọ dị mfe agba
Ihe mkpuchi aluminom-zinc nwere ezigbo nrapado na agba na enwere ike kpuchie agba na-enweghị ọgwụgwọ.
6. Galvalume Aluzinc Steel Coil nwere ọmarịcha elu ọcha na-acha ọcha.
AZ50 0.40MM Okirikiri Galvalume Aluzinc steel coil
AZ50 0.40MM Okirikiri Galvalume Aluzinc Steel Coil nwere ọmarịcha spangle elu dị larịị. Ọdịdị mkpuchi aluminom pụrụ iche na zinc na -eme ka ọ nwee nguzogide corrosion dị mma, nguzogide ọkụ dị mma, nrapado dị mma n'etiti mkpuchi na ihe nkiri agba, arụmọrụ nhazi dị mma nke ịkụ ọkpọ, ịkpụ, ịgbado ọkụ, wdg.
Galvalume Aluzinc Steel Coil For Corrugated Roofing
Galvalume Aluzinc Coil steel For Corrugated Roofing nwere ọmarịcha spangle elu dị larịị. Ọdịdị mkpuchi aluminom pụrụ iche na zinc na -eme ka ọ nwee nguzogide corrosion dị mma, nguzogide ọkụ dị mma, nrapado dị mma n'etiti mkpuchi na ihe nkiri agba, arụmọrụ nhazi dị mma nke ịkụ ọkpọ, ịkpụ, ịgbado ọkụ, wdg.
DX51D+AZ100 Galvalume Aluzinc steel coil
DX51D+AZ100 Galvalume Aluzinc Steel Coil nwere ọmarịcha spangle elu dị larịị. Ọdịdị mkpuchi aluminom pụrụ iche na zinc na -eme ka ọ nwee nguzogide corrosion dị mma, nguzogide ọkụ dị mma, nrapado dị mma n'etiti mkpuchi na ihe nkiri agba, arụmọrụ nhazi dị mma nke ịkụ ọkpọ, ịkpụ, ịgbado ọkụ, wdg.
55% Alu-Zinc Galvalume Aluzinc Steel Coil
55% Alu-Zinc Galvalume Aluzinc Steel Coil nwere ihu spangle dị larịị na-acha ezigbo ụtọ. Ọdịdị mkpuchi aluminom pụrụ iche na zinc na -eme ka ọ nwee nguzogide corrosion dị mma, nguzogide ọkụ dị mma, nrapado dị mma n'etiti mkpuchi na ihe nkiri agba, arụmọrụ nhazi dị mma nke ịkụ ọkpọ, ịkpụ, ịgbado ọkụ, wdg.
ASTM A792 G550 Galvalume Aluzinc steel coil
ASTM A792 G550 Galvalume Aluzinc Steel Coil nwere ọmarịcha spangle elu dị larịị. Ọdịdị mkpuchi aluminom pụrụ iche na zinc na -eme ka ọ nwee nguzogide corrosion dị mma, nguzogide ọkụ dị mma, nrapado dị mma n'etiti mkpuchi na ihe nkiri agba, arụmọrụ nhazi dị mma nke ịkụ ọkpọ, ịkpụ, ịgbado ọkụ, wdg.
Enwere ike ịhazi Galvalume Aluzinc Steel eriri igwe emere na China na ọnụ ala ma ọ bụ ọnụ ala. Ngwaahịa anyị bụ SGS na BV gbaara ezi àmà. Na mgbakwunye, ngwaahịa anyị na -adigide ma anyị na -enyekwa akwụkwọ ikike afọ 10. Witop Steel bụ ndị nrụpụta na ndị na -ebubata ngwaahịa na China na ndị ama ama Galvalume Aluzinc Steel eriri igwe. E wezụga, anyị na -akwadokwa nnukwu nkwakọ ngwaahịa. Ọ bụrụ na m nye iwu ugbu a, ị nwere ya na ngwaahịa? n'ezie! Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga -enye ọ bụghị naanị nlele efu kamakwa ndepụta ọnụahịa na nkwupụta. Ọ bụrụ na m chọrọ ịre ahịa, ọnụ ahịa ole ka ị ga -enye m? Ọ bụrụ na nnukwu ọnụ ahịa gị buru ibu, anyị nwere ike ịnye ọnụahịa ụlọ ọrụ. A nabatara gị ka ị bịa ụlọ ọrụ anyị ịzụta ihe ọhụrụ, ego mbelata na ogo dị elu Galvalume Aluzinc Steel eriri igwe. Ị nwere ike ijide n'aka na ịzụta ngwaahịa mbelata n'aka anyị. Anyị na -atụ anya ka gị na gị rụkọọ ọrụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị ugbu a, anyị ga -aza gị n'oge!
Maka ajụjụ gbasara galvanized steel coil, galvalume steel coil, PPGI steel coil ma ọ bụ pricelist, biko hapụ anyị email gị ma anyị ga -akpọtụrụ n'ime awa 24.
Nwebiisinka © 2021 Qingdao Sino Witop Steel Co., Ltd. - Galvanized Steel Coil, Galvalume Steel Coil, PPGI Steel Coil - Edebere ikikere niile.